Home » Onye mmadu » Onye Na-achọ Onye Na-achọ Onye Na-achọ Ịgba Okpukpe
Anyị na-ewetara gị otu nkwụsị n'efu iji gbalịa mee ka onye ọ bụla rịọrọ gị!
na Onye na-achọ ịchọta mmadụ , ị ga-enweta ohere na-enweghị njedebe na ọtụtụ narị ndị mmadụ na-arụ ọrụ. Na mgbakwunye na mgbatị ahụ ị ga-enweta ohere ịntanetị site na nkwụsị ụkwụ na-eduzi nduzi ahụike, kalenda mmemme, atụmatụ nri, na ihe ndị ọzọ. Nke a bụ naanị ụfọdụ n'ime nrụgide Beachbody na ị ga-enwe ike ịnweta nke ọhụrụ a na ịchọ ọrụ:
Pịa N'okpuru ebe a ka ịmalite iji ọnụahịa gị na-achọ Ịgba Ọsọ
Pịa ebe a ka ịmalite ịbịaru ọnụ gị
Mgbe ị debanyere aha, ị ga-enwetakwa ohere ịbanye na Team Beachbody Club. Otu Team Teambody na-agụnye atụmatụ ntụrụndụ ndị a mapụtara, ihe ntinye ego 10% n'ọdịnihu onye ịzụrụ ihe na Onye Ọchịchị, na mkparịta ụka na ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-achọ Onye Na-achọ Onye Ọchịchị mgbe ikpe gị gasịrị, a ga-akwụ gị ụgwọ $ 2.99 kwa izu. A ga-akwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ gị $ 38.87 nke ọ bụla tupu oge eruo. Enwere ike ịkagbu onye na-achọ onye na-eme ka ọ bụrụ onye ọ bụla mgbe ọ na-akpọ nọmba nke ahịa ahịa nke Beachbody.
One chere na "Onye Na-achọ Onye Na-achọ Onye Na-achọ Ịgba Okpukpe"